एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा काभ्रेमा एमाले पहिलो दल
काभ्रे । स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७४ मा नेकपा एमालेले प्रमुख पदमा ६८ हजार ६ सय ४७ मत प्राप्त गरेको थियो । एमालेले थपिएका मतदातामाझ एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा जिल्लामा १६ हजार ६
रौतहट । रौतहटका १८ वटै स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेसले सात, नेकपा९एस०ले चार, एमालेले तीन, लोसपाले दुई तथा जसपा र माओवादी केन्द्रले एक एक
रौतहटकाे गरुडा नगरपालिकामा नेकपा एमाले विजयी
रौतहट । रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ । एमालेको तर्फबाट प्रमुखमा कन्थमनी प्रसाद कलवार निर्वाचित भएका हुन् । जिल्लाको गरुडा नगरपालिकामा नेकपा एमालेका कलवारले नेकपा एसका बृज
हेटौंडा/ लमजुङ । स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा विजयी उम्मेदवार विष्णुबहादुर विष्ट र नेकपा एमालेका उम्मेदवार अच्युतम् प्रसाद ढकालबाहेक हेटौंडाको थाहा नगरका सबै उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ ।
माओवादीको चुनावी समीक्षा : पहिला जितेका जनप्रतिनिधिलाई दोहोर्याउँदा ५० प्रतिशत गुमाउनु पर्यो
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचको समीक्षा गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन : लमजुङमा एमाले बन्यो पहिलो पार्टी
लमजुङ । स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम अनुसार लमजुङमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख एवं अध्यक्षहरुको मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेको मतभार धेरै देखिएको
रसुवाको स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला सहभागिता शून्य बनेको छ ।
ललितपुर महानगरका मेयर र उपमेयरद्वारा पदबहाली
ललितपुर। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र उपमेयर मञ्जली शाक्यले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । बिहान मुख्य निर्वाचन अधिकृतसंग पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरे लगत्तै पुल्चोकस्थित महानगरपालिकाको कार्यालयमा पदभार
वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह : जसको भाग्य गठबन्धनले चम्कायो
वीरगन्ज । नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नु भएका वीरगन्ज महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख राजेशमान सिंह गत फागुन अन्तिम साता एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो । लोसपामा रहनु भएका सिंह वीरगन्जको
ओलीको ब्रिफिङ : चुनावमा धाँँधली भयो, आफ्नै नेता कार्यकर्ताले भोट दिएनन्
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचमा धाँधली भएको बताएका छन् ।
७४५ पालिकाको मतगणना सम्पन्न, कुन दलले कति जिते ?
देशका ७५३ पालिकामध्ये ७४५ वटाको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनलाई हराउँदै एमाले विजयी
तुलसीपुर उपमहानगरपालिको मेयर र उपमेरमा सत्ता गठबन्धनलाई हराउँदै नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अपडेट अनुसार काठमाडौं महानगरका ३२ वडामध्ये हालसम्म २७ वटाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ ।
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन साह)को जित सुनिश्चित भएको छ । जित सुनिश्चित भएसँगै उनले घोषणापत्रमा भएका कुराहरु लागू गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय
बाँके । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) विजयी भएको छ । प्रमुखमा दिपेश थारू तथा उपप्रमुखमा मनकलाकुमारी चौधरी विजयी भएका हुन् । थारू नौ हजार ८०७
वागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा उपमहानगर मेयरमा मीना लामा विजयी हुनुभएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाममा बारा जिल्लामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।
पोखरा महानगरमा धनराजको जित निश्चित, मेयरमा निर्वाचित हुनु अगावै अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीसँग सुटुक्क भेट
पोखरा । पोखरा महानगरको मतगणना चल्दाचल्दै धनराज आचार्य काठमाण्डौं पुगेका छन् । आफु पोखराको मेयरमा निर्वाचित हुने निश्चित भएपछि उनी महानगरको बजेटका लागि काठमाण्डौं पुगेका हुन् । ‘म निर्वाचित हुन्छु
स्थानीय तह निर्वाचन : बाँकी १२ वटा पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम कहिले आउँछ ?
वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचको मतपरिणाम आउनेक्रम जारी नै छ ।
काठमाडौंमा बालेन शाहलाई लोकप्रिय, सुनिता डंगोललाई सर्वाधिक मत
पछिल्लो चरणमा भएको अद्यावधिक मतपरिणामलाई आधारलाई मान्ने हो भने बालेन शाहलाई लोकप्रिय, सुनिता डंगोललाई सर्वाधिक मत परेको छ ।